नेता कसरी महान् बन्छन् ? यस्ता छन सफलताका ११ सूत्र !::Online News Portal from State No. 4
बागलुङ, ८ फागुन-कुशल सञ्चार कलाबिना महान नेता बन्नु असंभव छ। विश्वभर पढाइ हुने शिक्षाका आधारमा यस्ता कुशल वक्ता भेटिएलान् भनेर कमै आशा गर्न सकिन्छ। सञ्चार शिक्षाको कक्षामा व्याकरणका शब्दावली, पदावली, उपस्थिति, वितरणका तरिकाहरु सिकाइन्छन्। यस्तो शिक्षा कुशल संवाददाता बन्नका लागि आवश्यक छ। हो, नेताहरुलाई यस्ता विषयको ज्ञान आवश्यक हुन्छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि योभन्दा माथि उनीहरुको प्रस्तुति हुनुपर्दछ।